Virgil van Dijk oo farriin u diray Kubbad-sameeyaha kooxda Man City ee Kevin De Bruyne – Gool FM
(England) 10 Sebt 2020. Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa fariin u diray ciyaaryahanka khadka dhexe reer Belgium iyo kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne.
Virgil van Dijk ayaa u habalyeeyay laacibka khadka dhexe reer Belgium iyo kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne, kaddib markii uu ku guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka ee PFA.
Laacibka khadka dhexe ee Kooxda Manchester City, Kevin De Bruyne ayaa ku guuleystay abaal-marinta PFA ee xiddiga sanadka ugu wanaagsanaa guud ahaan Ingiriiska xilli ciyaareedkii tagay, waxaana uu ku graacay dhowr xiddig oo kooxda Liverpool ah.
Kevin De Bruyne ayaa abaal-marinta ku garaacay xiddigaha kooxda Liverpool ee afarta ah, kuwaasoo kala ah; Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson, Virgil Van Dijk iyo Sadio Mane iyo saaxiibkiis Raheem Sterling iyo Pierre-Emerick Aubameyang.
Virgil van Dijk ayaa fariin u marsiiyay boggiisa rasmiga ah ee Twitter-ka xiddiga khadka dhexe reer Belgium iyo kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne, wuxuu ku sheegay:
“Ilama xuma aniga ahaan inaad ku guuleysato abaal-marintaas, hambalyo, waxaad tahay nin cajiib ah”.
Si kastaba ha noqotee, Kubbad-sameeyahan Kevin De Bruyne ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee Manchester City ah ee abaal-marinta PFA ku guuleysta taariikhda.
Saúl Ñíguez oo ka hadlay wararka la xiriirinaya kooxda Manchester United